Mitambo, 01 Nyamavhuvhu 2017
Zimbabwe Warriors Yotarisira Kurova Namibia muMakwikwi eCHAN
Chikwata chemaWarriors chirikupinda mumakundano matsva eChampionship of Africa Nations nechinangwa chitsva mushure mekufadza veruzhinji nekutora mukombe weCosafa Castle Cup.
VaChiyangwa Vokurudzira VaTsigiri veNhabvu Kuti Vanotambira maWarriors kuNhandare yeNdege
Mutungamiri weZIFA VaPhilip Chiyangwa vari kukurudzira vanhu vose munyika kuti vaende kunhandare yendege yeHarare International Airport neChipiri masikati kunotambira chikwata cheZimbabwe Warriors icho chakashura mare nekudambura Zambia 3-1 kuSouth Africa nemusi weSvondo chichibva chasimudza mukombe weCOSAFA Castle Cup.
Chikwata chema Warriors Chounza Mufaro Kuvatsigiri veNhabvu
Chikwata ichi neSvondo chakasimudza mufaro nekunyora peji idzva munhoroondo yemakundano eCosafa Castle Cup apo chakaita chikwata chekutanga kutora mukombe uyu kashanu nekurakasha Zambia 3-1 muRoyal Bafokeng Stadium kuSouth Africa.
Vatsigiri veNhabvu Votarisira Kuti maWarriors neCaps Vachasimudza Mureza weZimbabwe
MaGreen Machine eCaps United nemaWarriors eZimbabwe vane chivimbo chekuti vachafadza vatsigiri vavo apo vachapinda munhandare muCaf Champions League neCosafa Castle Cup mukupera kwesvondo. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi
Muimbi Thomas Mapfumo Osvitsa Makore Makumi Manomwe neMaviri Achiti Hapana Chekupemberera
Muimbi ane mukurumbira zvikuru munyika Thomas Mukanya Mapfumo uyo akasvitsa makore makumi manomwe nemaviri musi wa 3 Chikunguru anoti hapana chekupemberera nekuti ari muhupoteri uye vanhu vakawanda munyika vari kunonga svosve nemuromo.
Chikwata chenyika chemaWarriors chapinda muma semi fainari eCosafa Castle Cup nekudambura Swaziland 2-1, zuva rimwe chetero maGreen Machine eCaps United akaita zvanga zvisingatasirirwe nekurakasha Zamalek yekuEgypt 3-1 mumutambo weCaf Champions League.